ဘီယာသောက် တာက သင့်ရဲ့ကိုလက်စထရောထိန်းချုပ်မှုအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်စေလဲ - Hello Sayarwon
ဘီယာသောက် တာက သင့်ရဲ့ကိုလက်စထရောထိန်းချုပ်မှုအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်စေလဲ
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။ 01/04/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဘီယာသောက် တဲ့အလေ့အထဟာ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ရေပန်းစားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘီယာကြောင့် သွေးတွင်းထရိုင်ဂလစ်စရိုက်ပမာဏ မြင့်တက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ LDL နဲ့ HDL ကိုလက်စထရောပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်း စတဲ့ နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ဘီယာသောက်တာက ကိုလက်စထရောထိန်းချုပ်မှုအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်သလဲဆိုတာ ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘီယာမှာ ကိုလက်စထရောနဲ့ ပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့ sterol ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်
ဘာလီ၊ တဆေးနဲ့ တဆေးသီးအဖူးတို့ပါဝင်တဲ့ ဘီယာကို ပေါင်မုန့်အရည်လို့တောင် ခေါ်ဝေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဘီယာမှာ ကိုလက်စထရောနဲ့ပေါင်းစည်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပဆီရောက်အောင် ပို့ဆောင်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ polysterol ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အချို့သော polysterol တွေ (တစ်နည်းအားဖြင့် အပင်ကရတဲ့ sterol တွေ) ကို အစားအသောက်တွေထဲ ထည့်သွင်းပြုလုပ်ပြီး ကိုလက်စထရောလျှော့ချပေးတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ် ဈေးကွက်မှာ တင်သွင်းရောင်းချနေတာကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ကြွက်တွေနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနအချို့မှာ ဘီယာအတော်အသင့် သောက်သုံးခြင်းက အသည်းနဲ့ သွေးလွှတ်ကြောမကြီးထဲက ကိုလက်စထရောပမာဏကို လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပညာရှင်အချို့ကလည်း ဘီယာမှာပါဝင်တဲ့ အမျိုးအမည်မသိ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ lipoprotein ချေဖျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျော့ကျစေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဘီယာသောက် တာက ကိုလက်စထရောပမာဏအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သလဲ
ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ကိုလက်စထရောအတော်များများဟာ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး အချို့ကိုတော့ အစားအသောက်ကတဆင့် ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘီယာမှာ မုယောစပါး၊ တဆေး၊ တဆေးသီးအဖူး စတာတွေအပြင် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ အယ်လ်ကိုဟောတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘီယာသောက်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ သွေးတွင်းထရိုင်ဂလစ်စရိုက်ပမာဏ လျင်လျင်မြန်မြန် မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထရိုက်ဂလစ်စရိုက်မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ စုစုပေါင်းကိုလက်စထရောပါ တစ်ပါတည်း မြင့်တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီယာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုသောက်သုံးမလဲ
အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ဘီယာသောက်သုံးခြင်းက ထရိုင်ဂလစ်စရိုက်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင်ဟာ ဘီယာသောက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အောက်ပါအကြံပြုချက်တွေအတိုင်း ကြိုးစားလိုက်နာကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဘီယာသောက်တဲ့အတိုင်းအတာကို အကန့်အသတ်ထားပါ။ သင်က အသက်၅၀အောက်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ဘီယာ ၇၀၀ မီလီလီတာထက် ပိုမသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ အသက်၅၀အထက်ဆိုရင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး ဘယ်သူမဆို တစ်နေ့ ၃၅၀ မီလီလီတာထက် ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။ ဘီယာသာမက အခြားအယ်လ်ကိုဟောအမျိုးအစားတွေကလည်း ထရိုက်ဂလစ်စရိုက်ပမာဏကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ အကယ်၍ ဝိုင်သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ၁၂၀ မီလီလီတာဝင် ဖန်ခွက်၂ခွက်ထက် ပိုမသောက်သင့်သလို အယ်လ်ကိုဟော ၄၀ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့ ယမကာသောက်သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ၄၅ မီလီလီတာဝင် တစ်ခွက် သို့မဟုတ် ၂ခွက်ထက် ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။
ဘီယာသောက်သုံးခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်ကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ တစ်နေ့ကို ဘီယာ ၃၅၀ မီလီလီတာ သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် ကယ်လိုရီ ၃၀၀နည်းပါး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကယ်လိုရီကို လောင်ကျွမ်းပစ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဘူးဆိုရင် ၁၁ရက် သို့မဟုတ် ၁၂ရက်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ဝ.၅ ကီလိုဂရမ်လောက် တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်အလေးချိန်လွန်ကဲခြင်းကြောင့် မကောင်းတဲ့ LDL ကိုလက်စထရောနဲ့ ထရိုင်ဂလစ်စရိုက်ပမာဏ မြင့်တက်လာပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ HDL ကိုလက်စထရောပမာဏ လျော့နည်းလာနိုင်ပါတယ်။
ဘီယာအများအပြားသောက်သုံးခြင်းက သင့်ကို နှလုံးအားနည်းစေပြီး လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုနည်းတဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံ၊ အရက်စွဲလမ်းခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း စတဲ့ ပြဿနာတွေဆီ ဦးတည်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘီယာကို တော်ရုံသင့်ရုံ သောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးရလဒ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် သောက်သုံးမှုပုံစံကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အကြံဉာဏ်ရယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
How does beer affect your cholesterol control? http://www.healthline.com/health/high-cholesterol/cholesterol-and-beer#1. Accessed August 10, 2017
Does beer raise cholesterol? http://www.livestrong.com/article/518422-does-beer-raise-cholesterol/. Accessed August 10, 2017
ကိုလက်စထရောတက်နေချိန်မှာ ဘယ်အသားတွေ စားလို့ရနိုင်မလဲ
မျက်လုံးစမ်းသပ်ရုံနှင့် သင့်မှာ ကိုလက်စထရောများကြောင်း သင်သိနိုင်မလား
ခေါင်းမူးမှ သွေးတိုးတာ မဟုတ်ပါ